इलामका दश स्थानीय तहमा २ सय ७४ क्षमताको क्वारेन्टाईन व्यवस्था, ८८ जना क्वारेन्टाइनमा
इलामः कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि इलामका १० स्थानीय तहले २ सय ७४ जना क्षमताकमो क्वारेन्टाईन निर्माण गरेका छन । हाल सम्म ८८ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । इलामनगरपालिकामा ६ जना र रोङ गाउँपालिकामा ८२ जना गरी ८८ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यलय इलामका प्रशाशकीय अधिकृत सूचना अधिकारी सफल पोर्तेलले बताए । हाल सम्म इलाम अस्पतालले नौ जनालाई कोशि अञ्चल अस्पताल रेफर गरेको छ । अत्यधिक ज्वरो आएका नौ वर्षिय बालक सहित नौ जना रेफर गरिएको डा. प्रभु शाहले बताए । उनले भने अत्यधिक ज्वरो देखिएपछि रेफर गरिएको हो कोरोनानै भनेर होईन ।
इलाम नगरपालिकाले सिङफ्रिङमा रहेको डा मेघबहादुर पराजुली सामुदायिक अस्पतालमा १५ जना क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाएको छ । सो अस्पतालमा रहेको क्वारेन्टाइनमा भारतबाट आएका ६ जनालाई राखेर नियमित फलोअपमा राखिएको पोर्तेलले बताए । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) पोजेटिभ देखिएकी फ्रान्सबाट आएकी युवतीसँगै दोहा कतारबाट जहाजबाट आएका इलाम नगरपालिका वडा नं. ४ का एक युवा इलाम अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।
देउमाई नगरपालिकाले भानुभक्त माविमा १० वेडको क्वारेन्टाइन बनाएको छ । नगरभित्र हालसम्म बैदेशिक रोजगारीबाट आएका २० जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन ।
रोङ गाँउपालिकामा १सय ५० जना क्षमताको क्वारेन्टाईन निर्माण गरेको छ । अहिलेसम्म भारत र अन्य मुलुकबाट घर फर्किएका नागरिकहरुको तथ्याङ्क संकलन गरि ६२ जनालाई स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रत्यक्ष निगरानी रहने गरि सुरक्षित बासको ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी सरक्षित निगरानी केन्द्रमा बसेकाहरुको लागि भोजन, बत्ती , पानी , टेलिफोन र इन्टरनेटको ब्यवस्था गाँउपालिकाले मिलाएको र दैनिक २ पटक स्वास्थ्य परिक्षण भइरहेको छ ।
माईजोगमाई गाउँपालिकामा २ स्थानमा १३ बेडको क्वारेन्टाइन स्थापना गरेको छ । गाउँपालिकाले नयाँबजारको अमरकल्याण माविमा १० बेड र नेपाल ज्योती माविमा ३ बेडको क्वारेन्टाइन बनाइको हो । भारतबाट आएकाहरुलाई होम क्वारेन्टाइनको सल्लाह दिएको भए पनि हाल सम्म कसैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छैन ।
माङसेवुङ गाउँपालिकाले जनता आधारभुत विद्यालयमा १० बेडको क्वारेन्टाइन स्थापना गरेको छ । गाउँपालिका प्रवेश गर्ने मुख्य बाटोहरुमा चेकजाँचका साथै दैनिक खाध्य बस्तुहरु स्टकका लागि दमकबाट आयात गरिएको छ ।
चुलाचुली गाउँपालिकाले १ सय ५०जना क्षमताको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । गाउँपालिकाले कमलको जनता माविमा ७ बेडको स्थापन गरेको छ । बाह्रगोठेको जनता माविमा १५ बेडको स्थापना गर्न छलफल भइरहेको छ । विभिन्न देशबाट आएकाहरुको बारेमा टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई लगत संकलन गर्न खटाइएको छ ।
माई नगरपालिकामा ४ जना क्षमताको क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ । नगरले स्थानिय गरुवा बहुमुखी क्याम्पसमा क्वारेन्टाइन स्थापन गरेको हो । अहिले सम्म कसैलाई क्वारेनटाइनमा नराखिएको पाइएको छ । माइ नगरपालिकामा भारत सहित बैदेशिक रोजगारीबाट आएका १ सय बढिको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्दा शंकास्पद लागेको एक जनालाई मेची अञ्चल अस्पताल पठाएको थियो ।
सन्दकपुर गाउँपालिकाले पालिका भित्र रहेको ६ वटा माध्यमिक विद्यालयमा ५० जना क्षमताको क्वारेन्टाइनको तयारी गरिरहेको छ । गाउँपालिकामा कोरोनाका आशंकामा २ जना विराटनगर रेफर भएका छन् । सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं ३ का एक युवक र उनकी आमालाई इलाम अस्पतालले कोशी अञ्चल अस्पताल बिराटनगर रिफर गरेको हो ।
जनप्रतिनिधिको एक महिनाको भत्ता कोरानो नियन्त्रणमा
इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिहरुको एक महिनाको तलव र भत्ता कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्ने भएको छ । गाँउपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती राईका अनुसार जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ताबाट सेनिटाइजर, डिटोल, सावुन मास्क लगायतको खरिद गरिनेछ । गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा २ हजारको दरले मास्क वितरण गरेको राईको भनाई छ । गाउँपालिकाले केन्द्र नजिकैको सिंहदेवी माविमा २० शैयाको क्वारेन्टाइन बनाउन थालेको र बैदेशिक रोजगारीबाट आएकाहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गरि हाल होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको राईले बताईन ।